About Us - Changzhou maniry Motor Co., Ltd
Changzhou maniry Motor Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2000, ho toy ny matihanina maotera mpanamboatra in Changzhou tanàna, Shina. Mihoatra ny fahaiza-Production mihoatra ny 0.6 tapitrisa isan-taona Motors. Manome ny Company lehibe telo andianà vokatra: Hybrid stepper Motors, DC brushless Motors sy ny maotera mpamily.
Ny vokatra maniry tsipika no mpivaro-bary tamin'ny orinasa mpamokatra entana lehibe Companies for Industry ny automatique, ara-pitsaboana sy ny fikarakarana ara-pahasalamana fitaovana, milina mpanao pirinty, mpamatsy fitaovana, Information Technology, tokantrano appliance vokatra, ary pumping fitaovana.
Manana ekipa injeniera amin'ny traikefa nandritra ny taona maro ao amin'ny fangatahana injeniera, endrika Engineering mandroso amin'ny farany equipment.Our Engineering Staff dia manome ny tsara indrindra vokatra tsara amin'ny fanompoana, rehefa ny vokatra Fa raha atolotra ny mpanjifa. Changzhou maniry Motor Co., Ltd nahazo ny ISO9001: 2000 fanamarinana ary indrindra ny vokatra dia nankatoavina tamin'ny taona.
Ny Company manaraka ny fitsipiky ny "maitso manome vokatra" sy ny vokatra rehetra dia RoHS mifanaraka tsara. Amin'ny maha-mpamatsy manerantany, Changzhou maniry Motor Co., Ltd fatratra manaraka ny tondrozotra ny iraisam-pirenena Fitsipika sy ny fomba fanao ara-barotra. Efa tratra ny laza ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa nandritra ny taona maro. Ny tanjontsika dia ny "Hahazoana ny tsena amin'ny kalitao sy ny asa fanompoana" izay no feo ny mahazatra isan-maniry Changzhou Motor ekipa mpikambana.
Address: No.1 ZhengDa Road, ED-ZONE, Changzhou City, Jiangsu Province, Sina